Jawaabta Nathalie Koah ee Marlène Emvoutou oo ku eedeysay inay si been abuur ah u beenisay "Renaissance" - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Jawaabta Nathalie Koah ee Marlène Emvoutou oo ku eedeysay inay si been abuur ah u beenisay "Renaissance"
Jawaabta Nathalie Koah ee Marlène Emvoutou oo ku eedeysay inay si been abuur ah u beenisay "Renaissance"
20 Oktoobar ee la soo dhaafay, Nathalie Koah waxay soo bandhigtay shaqadeedii labaad oo cinwaankeedu ahaa "Renaissance". Renaissance waxay dib u soo celineysaa safarkii haweeney ay ku dhaawacantay dharbaaxo nolosha laakiin ku guuleysatay inay is-beddesho.
Dhamaan dagaallada, shakiga, xanuunka, farxadda reer Cameroon waxay kuxiran yihiin buuggan kaas oo diiwaangelinaya guul-soo-dhaweyn. Isla markiiba waxay u muuqatay in Marlene Emvoutou (oo ah ninka ay xafiiltamaan ee reer Cameroon) ay ku eedeeyeen Nathalie inay si khaldan u maamushay shaqadii Marion Bartoli, ayay tidhi, waxay sheegaysaa sheeko tan la mid ah. Haddii danta ay quseyso aysan horay ugu dhawaaqin kiiskan, waxay maanta siisay xuquuq jawaabcelin intii lagu gudajiray qoraalkeeda "lagu eedeeyey Levez-Vous":
Sidoo kale akhri: Maria Mobil oo ku saabsan Jonathan Morrison: "masayrkiisu wuu ka badan yahay xadka"
Ma aanan akhriyin buugga la igu eedeeyay in uu jabsaday sheekada. Shaqadaydu waa la sii daayay Oktoobar 20, eedeymaha ayaa la bilaabay isla maalintaas. Sidee bay (Marlène Emvoutou) u aqrisay si ay u rumowdo inay tahay wax soo saarkii khiyaanada? Waa inaan joojineynaa fikradaha qaldan, ayay tiri iyada oo aamminsan si loo caddeeyo dhaliil kasta.
Xusuusnow in kor u qaadista buugaagta haatan lagu hayo Abidjan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/people/actu/la-reponse-de-nathalie-koah-a-marlene-emvoutou-qui-la-accusee-de-plagiat-sur-renaissance
Garoua: Wiil dhalinyaro ah ayaa kufsaday gabar la sheegay inuu khaniis yahay
Hadalka Amazon Bluetooth ee ka imanaya 19,57 USD, Maanta oo keliya - BGR
Jules Benchetrit: kalsoonida uu ka qabo walaashiis Saa'uul
Amiir Andrew wuxuu siiyaa BBC mid gaar u ah "Boos celis". wareysi ku saabsan Jeffrey Epstein
Hindiya: Way fiicantahay in lagu hayo "3 dadka" xabsiga haddii Kashmir uu nabad ku sii jiro: Jitendra Singh saraakiisha | Wararka Hindiya
DADKA & LIFESTYLE7,520